Xukuumada Somalia oo Ansixisay Hanaanka doorasho ee dalka ka dhaceysa iyo Habka loo soo xulayo labada aqal |
Halkan ka Aqriso qodobada Shirka ka soo baxay
Muddadii ka danbaysay 16kii diseembar wadahadalo iyo wadaxajood dheeraad ah ayay galeen madaxda dowlada fedaraalka iyo maamul goboleedadu, kuwaas oo socday intii u dhaxaysay 17-27 Janaayo 2016 kana qabsoomay magaaloyinka Kismaayo iyo Muqdisho.
• Mabaadi’da ku xusnaa baaqi muqdisho
• Himilada iyo hiiigsida dadka Soomaaliyeed oo hamuun u qaba in ay doorashadu ku qabsoonto mudadii loogu talo galay iyo weliba in anu jiri doonin mudo korodhsi loo sameeyo xukumada ama baarlamaanka
• Kulamadii wada xaajoodka ahaa ee dhexmaray madaxda Soomaaliyeed ee heer federaal iyo heer maamul goboleed oo suurto gelinwaayey in la helo hal hab doorasho oo wadar ogol ah.
Iyadoo ka duulaysa qodobada kor ku xusan waxay xukumada Federaalka ee Soomaaliya soo bandhigtay hanaanka doorasho ee hoos ku xusan, oo ay u aragto inuu yahay habka ugu haboon ee lagu hirgelin karo doorshada 2016ka.
Raiisal Wasaaraha xukuumada ayaa taarikhdu marki ay ahayd 27/01/2016 la wadaagay go’aanka dowlada madaxda maamul goboleedyada, baarlaamaanka Soomaaliyeed iyo wakiilada beesha caalamka oo dhamantood soo dhawaayey go’aanka dowlada.
• Tirada kuraasta baarlamaanka ee Aqalka Hoose waxay noqonaysaa 275.
• Kuraasta Aqalka Hoose ee Baarlamaanka waxaa lagu qaybin doonaa habka 4.5.
• Codeynta iyo tirintu waxay ka dhacayaan mid kasta caasimadaha dowlad goboleedyada federaalka ee hadda jira iyo kuwa sameysmaya (iyadoo qorshe gaar ah loo sameyn doono Soomaaliland).
• Aqalka Hoose iyo Aqalka Sare ee Baarlamaanka isla mar baa la dhisi doonaa.
• 48 ka mid ah xubnaha Aqalka Sare ayaa si siman loogu qaybin doonaa dowlad goboleedyada federaalka ee hadda jira, kuwa sameysmaya iyo kuwa mustaqbalka.
• Mid kasta oo ka mid ah dowlad goboleedyada federaalka waa inay ugu yaraan hal ka mid ah kuraasteedaa ay ku leedahay Aqalka Sare u qoondeyso dadka laga tirada badanyahay.
• Xubnaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka waa inay soo doortaan goleyaasha baarlamaanka mid kasta oo ka mid ah dowlad goboleedyada federaalka hadda jira iyo kuwa sameysmaya